Tusbax Furtay UBBO"Hibo Cali Malow oo Tidhi Yaynan Ku Hoolaalin Been-Quutayaasha Lafta Toobinka Ku Haya. - Cakaara News
London(CN) Khamiis jan-16,2014. Waxaan la iska Indhosaabi karin ka dib markii la helay Hogaamin Hanata Kalsoonida Shacabkeeda Dal iyo Dibadba in laga soo kabtay Majaraabawgii iyo Dibudhicii UBBO ay baday taasooy una Dheerayd Xasuuq aynan u aabayeelin oo Saameeyay Dhamaanba Birimagayda.
Dhanka kale waxaa iyana sii hurin jiray Dabka ka Holcayay Deegaanka ee ay UBBO Xaabada Dhamacda ah ku ololinaysay Qaar ka mida Qurbajoogta Deegaanka oo Qalbigoodu u nuglaa Beenta iyo Mala-awaalka ay UBBO Mukuurin jirtay oo qaadhaan aafeeyay Ehelkood iyo Qaraabadood iyaguna u soo tuuli jireen UBBO kuwaasoon marna ka fikirin halka xaal marayo.
Halkaa markay giraantu maraysay ayaa ay ka dib socdaaladii dhaadheeraa ee madaxwaynaha iyo xukuumadiisu ku soo gaaf-wareegeen 5ta-qaaradood sida Yurub, Maraykanka, Australia,Asia iyo afrikaba Fagaarayaal Wadatashina lala soo yeeshay iyadoona dhanka kale ay Saxaafada Deegaanku caalamka Dhegahooda iyo indhahoodaba hordhigtay Xaqiiqda iyo Heerka Deegaanku Marayo taasoo naruuro u noqotay Qurbajoogtii Garwaaqsadeena in Dib u fikiraan kana Fiirsadaan ku sii jirida Baadida aan jirin ee UBBO Riyo-beenaadka ah(Think-Twice Diaspora).
Hadaba Markii Dib loo fikiray ayaa ay Qurbajoogta oo ahayd bartii ugu danbaysay ee ay UBBO culayska saari jirtay ay Hal-hal uga siibteen halka Maleeshiyadii UBBO ee Gudahana Tawxiidka Nabada iyo Horumarka loo Qabtay intii Tawbada alle waafajiyay.
Dhawr Bilood ka hor uunbay ahayd markii ay Sarkaaadii sarsare ee UBBO u joogay Australia,Kenya iyo Gudaha Deegaanka ay Fagaarayaal iyo Saxafadaba ku Muujiyeen Aragtidooda ku aadan Qaadashada Tubta Nabadaiyo Horumarka Sacabkoodana baal ka raacay haba ugu sii badnaadaan intii Hidar 29 ka danbaysay Noqotayna UBBO "Tusbax Dabada Ka Furay".
Gundhiga iyo Nuxurka maanta ayaa ku Wajahan in Shalay Kulamadii 9ka Gobol ee uu madaxwaynuhu kula yeeshay Waxgaradka Safaarada DFI ku leedahay London in ay Hibo Cali Malow oo ka mid ahayd Xubnaha ugu Firfircoon ee UBBO u joogay London Dhanka Dhaqaalaha ay Garaaqsatay Hanaanka Nabada iyo Horumarka ee ay Caynaanka u hayo XDSHSI kurbadiina ka degtay ay Mukhuursanayd Berisamaadkii.
Hibo Cali ayaa Sheegtay in ay 20 sano ka dib ogaadeen in ay Mas Dilan Geed u Dulsaarnaa islamarkaana Dhaayahooda ku arkeen Xaqiiqda iyo Waxqabadka Dhabta ah ee ay DDSI ku talaabsatay xididana loo aasay Kalsoonida Shacabka Dal iyo Dibadba kuwaasoo Udub-dhexaad u Noqday Tiirar Xukuumada DDSI ay Mudo yar ku Hanatay indhaha Gobolka iyo Caalamkaba.
isku soo wada Soohoo UBBO waxay Noqotay Tusbax Dabada ka Furtay oo waxaa Garoon idla ah isugu soo hadhay 3dii Awrkiraale oo Miciin Biday Warbixinta halgan kusheegooddii oo isugu soo biyashubatay Fanaanad Hebla iyo Fanaan Hebel ayaanu Bandhig Faneed ay Dhigi lahaayeen Ka Qashqashaadnay Guul kkkkkkk.